Ungawasebenzisa Kanjani AmaHashtag Ukukhulisa Ukufinyelela Komkhankaso Wakho | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 31, 2016 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 UJesse Quist
Ama-39% amabhizinisi ungalandeleli imikhankaso yabo yezenhlalo futhi kuholela emathubeni alahlekile. Ngizokukhombisa ukuthi ungawalandelela kanjani kahle ama-hashtag ngesikhathi semicimbi, nezindlela ongazisebenzisa ukwakha umkhankaso ofinyelela kabanzi. Ngizogxila ezintweni ezimbili:
Okubalulekile amamethrikhi kufanele ulungele ukukala lapho uqhuba umkhankaso we-hashtag
Simple Tricks ungasebenzisa ukukhiqiza ukufinyelela okubanzi
Amamethrikhi Omkhankaso Womphakathi Obalulekile
Iningi lemikhankaso yezenhlalo yenzelwe ukwakha ukuqwashisa kunokuqhuba ukuguqulwa ngokushesha. Unalokhu engqondweni, kuzofanele ucace mayelana nenhloso yomkhankaso wakho kanye namamethrikhi odinga ukuwalandela ukuze wahlulele impumelelo.
Ukusebenzisa UKeyhole ama-trackers we-akhawunti, uzokwazi landelela isisekelo salezi zimethrikhi ngaphambi nangemva kokuqalisa umkhankaso wakho we-hashtag.
Ukukhula komlandeli futhi isilinganiso sokubandakanya ikusize ulinganise umthelela ohlala njalo umkhankaso wakho we-hashtag onawo kumalungu omphakathi akhona nasanda kutholakala.
Kungani ukukhula komlandeli kuyimethrikhi ebalulekile yomkhankaso wezenhlalo?
Ukukhula komlandeli kuyimpawu yokufinyelela komkhankaso okhetha ukuwuqhuba. Kukhombisa ukuthi umkhankaso wakho ukwazile ukufinyelela kubasebenzisi abakade bengaxhunyiwe kumkhiqizo wakho.
Ukukala kahle umthelela womkhankaso wakho, bhala isilinganiso esimaphakathi sokukhula emasontweni angaphambi komcimbi. Bese, log ukukhula okumaphakathi kwansuku zonke ngemuva komcimbi.
[box type = "success" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Umcimbi okhuthazwe ngempumelelo kufanele ukhombise izinga lokukhula komlandeli elihamba phezulu ngalezi zikhathi. [/ box]
Okwamanje, izinga lokuzibandakanya likala ukusebenza komlayezo wakho. Uma umyalezo wena nabalandeli bakho eniwucindezelayo uphoqelela, kufanele ubone ukwanda kuzinga elijwayelekile lokuzibandakanya ku-akhawunti yakho.
Le metric futhi iyinkomba yokuthi wakha okuqondisiwe okulandelayo ngomkhankaso we-hashtag.
Ukulandelela kanjani ukukhula komlandeli?
Ungakwazi ukulandela umkhondo amamethrikhi ngokugcina ispredishithi osibuyekeza isonto ngalinye. Kuzofanele ungene kuzinguquko zomlandeli, kanye nezinga lokuzibandakanya lamasonto onke ngaphambi komcimbi. Kusukela ungagcina kuphela i-akhawunti eyodwa ye-Twitter ngayinye eyakhelwe ngaphakathi analytics dashboard, le ndlela ingadla isikhathi.
Kuzokushiya futhi ebumnyameni uma unamanxusa omkhiqizo akusiza ukukhuthaza umkhankaso - kuzofanela ukuthi upheqe kokuphakelayo ngakunye kwe-Twitter ukuqoqa amamethrikhi wokuzibandakanya lapho ecindezela umyalezo wakho.
[box type = "info" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Ungazenzela inqubo ngokusebenzisa i analytics media social ithuluzi elifana ne- Ukhiye. [/ ibhokisi]
Nge-Keyhole, ungakwazi ukulandelela ama-akhawunti amaningi endaweni eyodwa. Ipulatifomu ilandelela ukukhula komlandeli ngaphambi nangemva komkhankaso wakho, ukuqapha ukusebenza kwamanxusa akho.
Kubalulekile ukulandela amamethrikhi we-akhawunti yakho ngaphambi komkhankaso nokuthumela umkhankaso ukuze ufunde ukuthi yini esebenzayo, yini engasebenzi nokuthola umlayezo ohambisana nezithameli zakho ezintsha ezitholakele.
Yimaphi amamethrikhi okufanele uwalandele ngqo ukukala umthelela wemikhankaso yakho yama-hashtag?
Ukukala ukusebenza komkhankaso we-hashtag bekungeke kwenzeke ngaphandle kwamathuluzi ezinkundla zokuxhumana njengeKeyhole. Owomdabu we-Twitter analytics Uhlelo lukuvumela ukuthi ulandelele okuqukethwe okuzenzele kepha akukuniki ukufinyelela ekutheni ama-hashtag noma igama elingukhiye olikhuthazayo lisabalalisa kanjani endaweni yesikhulumi.
Amamethrikhi okunaka phakathi nomkhankaso wakho:
Finyelela - inani labantu abahlukile abangabona okuthunyelwe kwakho.
Okuvelile - inani eliphelele lokubukwa okungaba khona (kufaka phakathi abasebenzisi abafanayo ababona okuthunyelwe okufanayo kaningi)
Exposure - ilinganisa ukuvezwa okuphelele okwenziwe ngumsebenzisi, kufaka phakathi okuvelayo okwenziwe yi-Retweeters yabo
Izinga lokubandakanya elinomthelela - ilinganisa ukubandakanyeka okwenziwe kokuthunyelwe okwenziwe abantu ababandakanya i-hashtag yakho noma igama elingukhiye. Le yimethrikhi ekuvumela ukuthi uthuthukise umkhankaso wakho futhi wandise ukuvezwa komkhiqizo wakho, ngokufinyelela kubathonya abanenani eliphezulu lokuzibandakanya, uzokwazi ukufinyelela izithameli ezibanzi emakethe yakho eqondisiwe.
Nakhu ukubuka kuqala kwe-Keyhole's Reach and Impressions Analytics:
[box type = "warning" align = "" class = "aligncenter" width = "80%"] Njengoba i-Twitter ingahlinzeki ngamamethrikhi we-akhawunti ngqo kumathuluzi eqembu lesithathu, ukufinyelela kanye ne-Impressions okubaliwe kususelwa kunani lezikhathi okuthunyelwe kwavela. Le nombolo ibizwa ngokuvela okungahle kube khona. Okuvelayo kwangempela kungaba kusuka ku-3% kuya ku-13% kokuvelayo okungahle kuye ngezinto ezifana nesikhathi seposi, igama elingukhiye, nomsebenzi wabalandeli. [/ Ibhokisi]
Amaqhinga Alula Okukhiqiza Ukufinyelela Komkhankaso Obanzi
Ngaphambi kokuqala umkhankaso wakho, sebenzisa i-hashtag ne-trackword tracker ukulandela izihloko zomkhakha ezibanzi ezihlobene nomcimbi wakho. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kufanele uqale ukubona ama-akhawunti athola ukubandakanyeka kakhulu embonini yakho.
Finyelela kulaba bantu futhi ubameme ukuthi babambe iqhaza emkhankasweni wakho lapho uqala.
Sebenzisa i-akhawunti ithuluzi ukulandelela i-akhawunti yakho kanye neyabancintisana nabo. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uthole okuqukethwe kwakho okuhle kakhulu nezikhathi zokuthumela. Thuthukisa ukuthumela kwakho imiyalezo kokuqukethwe nokuphrinta okusebenza kahle kakhulu ngezithameli zakho. Faka ama-hashtag asebenze kahle ngokomlando emkhankasweni wakho.
[box type = "info" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"]Ithiphu le-Pro: lapho kuqashwa abathonya, funa abantu abathola ukubandakanyeka okungu-10 noma ngaphezulu ngeposi elifanele. [/ box]
Ukudalula: Sinesibopho sokudlulisela nathi Ukhiye.
Tags: lwekucocisanaukuchayekaumsebenzi womlandelihashtagizibalo ze-hashtagumkhankaso we-hashtagukuvezwa kwe-hashtagokuvelayo kwe-hashtagukufinyelela kwe-hashtagOkuvelileisilinganiso sokubandakanyaisihluthulelofinyelelaumkhankaso womphakathiukuzibandakanya komphakathiokulandelayo kwezenhlaloukuzibandakanya kwezokuxhumanazokuxhumana ezilandelayozokuxhumana ukufinyelelaukufinyelela komphakathiTwitter
UJesse UkhiyeUkukhula nokumaketha kuhola. Wakha uphawu lukaKeyhole ngokwakha ubudlelwano obuqinile nabanye abathengisi bezenhlalo futhi uthanda ukukhuluma ngokukhangisa.
Uhlu lwakho Lokuhlola Lokumaketha Oluphelele